शरीर बाहिर मुटु भएकी यि ५ वर्षकी बालिका – NepalajaMedia
शरीर बाहिर मुटु भएकी यि ५ वर्षकी बालिका
February 7, 2021 343
वेरसाविया नामले परिचित ५ बर्षिय बालिका सजको मुटु मुटु जन्म देखि नै शरीरको बाहिर निक्लेको हो । उनि अरु मानिले जस्तो साधारण जीवन बिताएकी छिन् । तर उनको बुबा आमा भने उपचारका लागि रुसबाट अमेरिका पुगेका छन् ।
उनको मुटुको उपचार गर्नेको लागि धेरै खर्च हुने भएकाले पैसाको जोहो गर्ने अमेरिकको संचार माध्यमले जनाएको छ । डाक्टरले उनको मटुको सर्जरी गर्न लागि २ वर्षपछि सल्ल्लाहा दिएका छन् । उनको धड्कन चलेको बाहिरबाट नै स्पस्ट देखिन्छ ।
याे पनि, आज मंगलबार सुनकाे भाउ बढ्यो, यस्ताे छ आजकाे भाउ । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मुल्य बढेको छ । सोमबार प्रतितोला ९२ हजार ४०० रुपैंयामा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा ४०० रुपैंयाले बढेर प्रतितोला ९२ हजार ८०० रुपैंयामा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मुल्य भने ९२ हजार ३०० रुपैंयाका किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ । त्यस्तैगरी आज चाँदी मुल्य तोलामा ५ रुपैंयाले घटेर प्रतितोला १२ सय ५५ रुपैंयामा कारोबार हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ ।
Prevपेन्सनवाला लाहुरेले बुढेशकालमा श्रीमतीलाई यस्तो गरे, के हुन लागेको यस्तो? (हेर्नुहोस भिडियो)
Nextफेसबुक म्यासेन्जरमा देखियो समस्या, तपाईंले गरेको कुराकानी अरुले सुन्न सक्ने
कस्तो पुरुषसंग सम्बन्ध बनाउन चाहान्छन युवतीहरु ? यस्तो भन्छ अध्ययन !
धन कमाएपछि अवश्य गर्नुहोस् यी ३ काम, नत्र हुन्छ धन नास (6431)